यस्तो बेलामा फेरी हेप्यो भारतले,रुटनै नदिएपछि भैरहवा र पोखरा विमानस्थल ब*न्द हुनसक्ने ! अहिले सम्म आनाकानी (भिडियो हेर्नुहोस) | Public 24Khabar
Home News यस्तो बेलामा फेरी हेप्यो भारतले,रुटनै नदिएपछि भैरहवा र पोखरा विमानस्थल ब*न्द हुनसक्ने...
यस्तो बेलामा फेरी हेप्यो भारतले,रुटनै नदिएपछि भैरहवा र पोखरा विमानस्थल ब*न्द हुनसक्ने ! अहिले सम्म आनाकानी (भिडियो हेर्नुहोस)
सरकारले बंगलादेशसँग खरिद गरेको युरिया मल मंगलबार नेपाल आइपुगेको छ। सम्झौता भएको ५० हजार मेट्रिक टनमध्ये मंगलबार २ हजार ५ सय मेट्रिक टन वीरगन्ज नाका हुँदै भित्रएको हो।
वीरगन्जस्थित सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाहमा एक रेलवे र्‍याक युरिया मल आइपुगेको वीरगन्जस्थित कृषि सामग्री कम्पनीको प्रदेशस्तरीय कार्यालयका प्रमुख गोरखनाथ केसीले बताए। एक रेलवे र्‍याकले २ हजार ५ सय मेट्रिक टन मल बोक्ने गर्छ। बंगलादेशले अनुदान र सापटीमा मल नदिने भएपछि गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट (जीटुजी) प्रक्रियाबाट सरकारले खरिद गरेको हो। पहिलो लटमा २२ हजार ५ सय मेट्रिक टन मल भारतको कोलकत्ता बन्दरगाह हुँदै नेपाल ल्याउने भनिएको छ।
पहिलो लटमध्येको २ हजार ५ सय मेट्रिक टन कोलकाता बन्दरगाहबाट भारतीय रेलमार्ग हुदै मंगलबार वीरगन्जस्थित सुख्खा बन्दरगाहमा आइपुगेको केसीले बताए। पहिलो लटकै ५ हजार ६ सय २५ मेट्रिक टन भने कोलकाता बन्दरगाहबाट सोझै ट्रकमा विराटनगर लगिनेछ। बाँकी ९ हजार मेट्रिक टन वीरगन्जको सीमावर्ती सहर रक्सौलस्थित रेलवे स्टेसनमा आउने क्रममै रहेको केसीले बताए। उक्त मल रक्सौलबाट ट्रकमा ढुवानी गरी वीरगन्जस्थित कृषि सामग्री कम्पनीको गोदाममा ल्याइनेछ।
पहिलो लटको २२ हजार ५ सय मेट्रिक टनमध्ये बाँकी रहने ७ हजार ८ सय ७५ मेट्रिक टन मल भने कोलकाताबाट रेलबाटै सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाहमै आउने केसीले बताए। कृषि सामग्री कम्पनीले थप १ लाख २० हजार मेट्रिक टन युरिया मल खरिद गरि चैत महिनाभित्रै नेपाल भित्र्याउने तयारी गरेको छ। कम्पनीले ५० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल पनि खरिद गरि नेपाल ल्याइसकेको छ।
Previous articleयस्तो कारण देखाउँदै संसद् बैठकमा नबसी बाहिरिए प्रधानमन्त्री ओली ! PM Kp Sharma Oli
Next articleExclusive: भर्खरै अदा*लात बाट रि*हा भए बिनय जंग | रु’दै भने सत्यको जित हुन्छ, मैले केहि गलत गरेको थिइन (भिडियो हेर्नुहोस्)